Tababar ku saabsan adeegsiga Korontada oo ka furmay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Tababar ku saabsan adeegsiga Korontada oo ka furmay Muqdisho
Tababar ku saabsan adeegsiga Korontada oo ka furmay Muqdisho
Muqdisho-(SNTV)-Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Soomaaliya ayaa Maanta tababar Afar Cisho socon doona ugu furtay Magaalada Muqdisho, xubno ka kala socda Dowladda dhexe, maamul Goboleedyada iyo matalayaal ka socda shirkadaha Korontada ee gaarka loo leeyahay.
Tababarkan ayaa lagu baran doonaa Laba qeybood oo muhiim u ah adeegga koronto ee Dalka, saameynta laga dhaxlay shirkadaha ku shaqeeya Matoorrada iyo sida looga faa’iideysan karo Cadceedda ama adeegyada Soollarka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiwaahid Ibraahim Axmed ayaa u sheegay ka qeyb galayaasha in sida loogu talo galay ay uga faa’iideystaan tababarkan oo ay bixinayaan khuburo isugu jira Soomaali iyo Ajaanib.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Soomaaliya Xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim oo daah furay tababarka ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku howlan tahay sidii loo soo saari lahaa xirfadlayaal dhameystiran, isagoo la dar-daarmay dhinacyada ka qeyb galaya tababarka.
Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku howlan sidii loo soo saari lahaa xirfadlayaal la diyaariyay oo si aqooni ku dheehan tahay uga shaqeeya adeegyada koronto ee Dalka.
Previous articleMadaxweynaha Farmaajo oo booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka Eriteriya